Jaamacada jijiga oo ay maanta ka qalinjabiyeen arday dhan 1058 iyo madaxwaynaha DDSI Bogaadiyay Kaalinta-Tayada Waxbarashada Jaamacadu Kaga Jirto Jaamacadaha Dalka. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Sabti Jan-11-2014:- Waxaa maanta lagu Qabtay Hoolka Shirarka ee SMCX Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ku Qalinjabinayeen jaamacada Jigjiga Arday ay Tiradoodu dhanayd 1058 una kala baxa Wiilal Dhan 818 halka Gabdhna yihiin 240,kuwaasoo ka mid ahaa Ardayda Habeenkii Wax ka barta jaamacada iyo Kuwa Xiliyada Xagaaga(Summer) wax ka barta jaamacada loo aayay ee Jgjiga University.
Xafladan Qalinjabinta ah ayaa ay ka Soo Qaybgaleen madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne ku xigeenada C/fataax Maxamed Xasan iyo C/xakiin Cigaal Cumar,wasiirka madaxtooyada mudane C/casiis Maxamed Cabdi, Madaxwaynaha jaamacada jigjiga Dr Ahmed Naasir, madaxwayne ku xigeenka jaamacada jigjiga mudane Suldaan Muhiyadiin Odawaa,maayorkaMaamulka Magaalada Jigjiga mudane C/risaaq Saxane , Macalimiinta Jaamacada jigjiga, Waalidiinta Ardayda qalin jabinaysa, iyo waliba marti sharafka kale.
Madaxwaynaha jaamacada ayaa warbixin ku saabsan Heerka Jaamcadu hada taagan tahay,laamaha iyo takhasusyada laga bixiyo,Balaadhinta jaamacada iyo laamaha cusub ee ay ka fureen Degmooyinta,laga soo bilaabo aasaaskii jaamacada Ardayda ka Qalinjabisay iyo Ardayda wakhtixaadirkan wax ka barata Jaamacada oo uu u kala saaray Kuwa Regularka ah,Kuwa Xagaaga iyo Kuwa Habeenki wax ku barta,isagoona tibaaxay in jaamacada Markii ugu horaysay ay sanadkan ka Qalinjabiyeen Ardaydii ugu horaysay ee Master Qaadata.
Sidoo kale madaxwaynaha jaamacada Jigjiga Dr C/naasir ayaa Sheegay in ay Laamo Cusub ka fureen Sanadihii ugu Danbeeyay Inta Badan xarumaha Gobolada iyadoona ay Sanadkan waxbarashada jaamacada ka bartaan arday dhan17,000 oo arday taasoon ku Gaadhnay kaalinta aanu maanta kaga jirno jaamacadaha Dalka oo badankoodu Wakhtiyo Hore la aasaasay Madaxwaynaha DDSI oo hadh iyo habeenka Taageero Dhinac kasta ah nala Garab taagnaa ayuu yidhi.
Dhanka Kale Waxaa Munaasabadan ka hadlay madaxwayne ku xigeenka jaamacada jijiga mudane suldaan muxiyadiin odawaa, wuxuuna si qoto dheer uga warbixiyay muhiimada ay waxbarashadu u leedahay horumarka dalka iyo kan deegaankaba taasoo ay saldhig u yihiin ayuu yidhi Qodoadan Hoos ku Xusan. Ø Sugida iyo kawada Shaqaynta Nabadgalya. Ø Inla helo aqoon Tayaysan ama waxbarasho la jaanqaadi karta Dunida. Ø Kaabayaal dhaqaale. Xeer Nidaamyo iyo Shuruuc dastuuri ah oo Haga Shacabka Shacab ay ka Go'an tahay Badhigantaalida Laamaha Dawlada.Wuxuuna sheegay in marka in taasi is-biirsadaan ay dhalaan wadan horumaray.
Sidoo kale Mudane Suldaan Muxiyadiin ayaa Sheegay in jaamacada Jigjiga ay Waxbarashada ay bixisaa ka kooban yihiin Dhamaan laamaha iyo Culuunta kala duduwan iyadoo in ka badan 50 Program ay leedahay Jaamacadu ayuu yidhi.ka dibna Codbaahiyaha ku soo Dhaweeyay Madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Munaasabad-farxadeedkan uu Nasiibku u saamaxay in ay ku Qalinjabiyaan Ardaydan baratay Culuunta kala duduwan ee Laamaha Jaamacada Jigjiga ayaa uu madaxwaynaha DDSI Md cabdi maxamuud cumar Daareen farxadeed ugu Hambalyeeyay ugu horayn Ardayda Maanta Nasiibka u heshay in ay ka Qalinjabiyaan sanado ka dib Waxbarashada Jaamacada,sidoo kalana Mahadnaq balaadhan u jeeiyay Macalimiintii la soo tacaashay Waxbarida Ardaydaniyo Maamulka Jaamacadaba.
Madaxwaynaha ayaa Tibaaxay in jaamacada jigjiga ay kaalin xoogan kaga jirto ka midhodhalinta Qorshayaasha Kobaca Dhaqaale ee uu Dalku Hiigsanayo,islamarkaana ay kaga jirto kaalinta 1aad 15kii Jaamacadood ee ay isku Xiliga laga aasaasay Dalka islamarkaana ay kaalinta 3aad ka gashay Jaamacada Jigjiga Jaamacadaha Guud ahaan Dalka ka jira waana guul deegaanka u soo hoyatay ayuu yidhi Madaxwaynuhu.
Madaxwaynaha ayaa Carabaabay in Jaamacada Jigjiga ay u aayeen Waxbarashadeeda Ardayda Deegaanka,Kuwa Deegaanada kale iyo Waliba Deriska iyadoona sanad kasta soo saarta Cudud Ciidan Horumarineed oo ku Gaashaaman Aqoon iyo Xirfad ay ku Dabooleen Baahidii Aqoonyahan ee Deegaanka Dhamaana kafeeyay QQaab-dhismeedyada Dawladeed ee ka jira Heer Deegaan,Heer Gobol,Heer Degmo iyo Heer Tuulaba.
Madaxwaynaha oo hadalkiisii sii wata ayaa Tilmaamay Tayada Waxbarashada Jaamacada iyo Dadaalada ay u Guntatay si ay uga Midho dhaliso Himilooyinka tan iyo intii la aasaasay Jaamacada Jigjiga lagana furay oo ahayd Sanadkii 2001.T.I ayuu Yidhi. Madaxwaynuhu ayaa ku Bogaadiyay Waxqabadka hagar la'aaneed ee ay maamulka Jaamacadu ku balaadhiyeen Dhamaanba Gobolada iyo Degmooyinka iyadoona aynan ku ekayn kaliya Magaalada Jigjiga balse ay Jaamacada JJ laamo Cusub ka furatay Gobolada Nogob, Siti, Liibaan, Afdheer Shabeele Qorashay iyo Jarar Taasoo ka sakow Shacabka farxad Galisay Xukuumada ayuu yidhi.
Ka dib ayaa uu Madaxwaynuhu ku Booriyay Ardayda Qalinjabisay in ay u Guntadaan sidii ay Ficil ugu Muujin lahaayeen Culuuntii ay Jaamacada ku Barteen in ay Bulshadooda ugu adeegaan kana Haqabtiraan Adeeg Hufan oo Tayo leh si ay u manaafacaadsadaan Shacbweynaha Deegaaku.
ugu Danbayntii ayaa madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar lagu Sharfay in uu Gudoonsiiyo Abaalmarino Ardayda kaalimaha 1aad,2aad iyo 3aad ka gashay Ardaydan qalinjabinaysa Xiligii Waxbarashada ay ku jireen. Isku Soo Wada Soohoo jaamacada Jigjiga oo ka mid ahayd 15kii Jaamacadood ee Cusbaa laga aasaasay dalka sanadkii 2001.T.I ayaa haabanaysa in ay Kaalinta 1aad ka Gasho Guud ahaan Jaamacadaha Dalka halka ay 15kii Dhigeeda ahaana kaga Jirto kaalinta 1aad.